> Resource> iTunes> iTunes Data Recovery: selectively Naghachi iDevice si Data si iTunes
Banyere iTunes Data Recovery software
Wondershare ITunes Data Recovery bụ a Mac iTunes ndabere extractor, nke na-enyere aka selectively ịhụchalụ na-agbake data si iTunes ndabere faịlụ. Ugbu a, ọ na-e dochie Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows iPhone Data Recovery) na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery). E wezụga adịrị iTunes ndabere, ma ndị omume-enye gị ohere kpọmkwem ike iṅomi na-agbake data gị iPhone, iPad na iPod aka. Jiri ya tụnyere Wondershare iTunes Data Recovery (Mac), Dr.Fone maka iOS (Windows & Mac) bụ a elu version nke ya.
Olee nnukwu version nke iTunes Data Recovery ọrụ
Wondershare Dr.Fone Maka iOS na-enye gị abụọ iche iche nke mgbake mode: kpọmkwem naghachi data si iOS ngwaọrụ (ọhụrụ akwado iOS9) na-agbake data si iTunes ndabere faịlụ. Ọ na-arụ ọrụ fọrọ nke nta niile iPhone (gụnyere iPhone6, iPhone 6 Plus), iPad na iPod aka. Ka ibudata ikpe mbipute nke ya n'okpuru na-enwe a na-agbalị ọnụ. The ikpe mbipute download bụ free.
Nkebi nke 1: iTunes Data Recovery: wepụ iTunes ndabere faịlụ naghachi data
Part 2: iDevice data mgbake: iṅomi iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ka naghachi data na ya
Ọzọ, ka na-na iTunes data mgbake maka Windows (Dr.Fone maka iOS) dị ka ihe atụ. Ka ego nzọụkwụ ugbu a.
Nzọụkwụ 1. wepụ iTunes ndabere
Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị, ịgbanwee gaa na ndị ọzọ mgbake mode: Naghachi si iTunes ndabere File. Mgbe ahụ gị niile iTunes ndabere faịlụ ga-hụrụ ma e depụtara ke n'ihu gị. Họrọ onye ị chọrọ wepụ na pịa na Malite iṅomi bọtịnụ.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake data si iTunes ndabere faịlụ
N'adịghị ka Iweghachi data si iTunes ndabere, ị nwere ike selectively ịhụchalụ na-agbake data si iTunes ndabere. Mgbe Doppler, ifiọk na nne Mmetụta ihe ị chọrọ ke Doppler N'ihi. Mgbe ahụ na-azọpụta ha na kọmputa gị site na ịpị Naghachi bọtịnụ.
Nkebi nke 2: iDevice data mgbake: iṅomi iPhone / iPad / iPod aka ka naghachi data na ya
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị omume na jikọọ gị iDevice na kọmputa
Agbake data ozugbo gị iDevice, ọ bụ ọhụrụ atụmatụ nyere site Wondershare Dr.Fone maka iOS. I nwere ike ịhụ ọrụ a na aga na iTunes Data Recovery software. Mgbe ị na-agba ọsọ ahụ software na jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa, ị ga-ahụ dị iche iche windows dị ka ihe nlereanya nke gị deivce.
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, iPad 1 na iPod aka 4, usoro ihe omume ga-egosi gị dị ka ndị a mgbe ịchọputa ngwaọrụ gị:
N'ihi na ndị ọzọ iPhone, iPad na iPod aka, gụnyere New iPhone 6 na iPhone 6 Plus na-agba ọsọ iOS 9, usoro ihe omume ga-adị ka nke a:
Nzọụkwụ 2. Malite ịgụ isiokwu gị iDevice
N'agbanyeghị nke ngwaọrụ ị na-eji, dị nnọọ eso nkọwa na window ime nzọụkwụ ọzọ. N'ihi na iPhone 3GS / 4, iPad 1 na iPod aka 4, idetuo na-esonụ ndu na-esi na gị na ngwaọrụ scanned.
1. Jide gị iDevice na pịa Malite button na-amalite ọrụ.
2. Wee pịa Home na Ike buttons n'out oge na ngwaọrụ gị maka kpọmkwem 10 sekọnd.
3. Mgbe 10 sekọnd gafere, hapụ Ike button na na-na na ịpị Home button ọzọ 10 sekọnd.
Ndị ọzọ iOS ngwaọrụ ọrụ, ị nwere ike na-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị site na ịpị Malite iṅomi button gosiri na isi window.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake data na gị iDevice
Doppler ga-ewe gị a obere mgbe. Mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-ewetara gị a Doppler N'ihi dị ka ndị a, ebe niile data hụrụ na ngwaọrụ gị na-egosipụta na edemede. Ịnwere ike ihuchalu ma ego ha otu otu, na selectively naghachi ihe ọ bụla ihe ị chọrọ ka gị na kọmputa.
Dị nnọọ download ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị for free.
Olee otú Naghachi iTunes Ndetuta egwu ọkpụkpọ na Windows PC
Songbird vs iTunes: Ihe Songbird ka nke ahụ iTunes apụghị